Semalt Expert: Ahoana ny fandroahana ny Botnet Trojan
Miparitaka ny botnet Trojan raha tsy marina sy azo itokisana ny fepetra fiarovana anao. Ireo mpampiasa izay tena mahatsiaro tena dia mety hahazo fanampiana avy amin'ireo mpanolotra tsy fantatra, izay mihambo ho tsy manan-tsiny ary te-hiditra amin'ny fifanakalozan-kevitra an-tserasera. Noho izany dia mangataka anao ry zareo hikiraoka amin'ny rohy manokana, izay tsy misy azo antoka. Ny fiparitahan'ny otrik'aretina dia miparitaka amin'ny alalan'ireo tranonkala na fifandraisana mampiahiahy. Izy ireo dia ahitana mpanamboatra bateria napetraka ao amin'ny rafitrao ary mahatonga azy ho tahaka ny zombies. Jack Miller, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa ny ankamaroan'ny tranga botnet botna dia voatatitra rehefa misy fiantraikany amin'ny rootkit manokana na ny soavaly Trojan na ny code code malaza ao amin'ny ordinateran'ny solosaina ary lasa ampahany amin'ny fahatsiarovany azy.
Ahoana no mahatonga an'ity aretina ity?
Tahaka ny fandaharan'asa hafa, ireo botnets Trojan dia niely tsindraindray ary mampihorohoro fitaovana maro amin'ny ordinatera. Ireo rindranasa ireo dia lasa ampahany amin'ny fitaovana elektronika ary tsy mamela anao hahafantatra fa manao asa an-tsitrapo izy ireo. Ho an'ny ankamaroan'ny faritra, ny botnets sy ny infections dia mamorona antontan-taratasy ao amin'ny fitaovanao ary mampihatra ny fahombiazany sy ny asany.
Ahoana no hanaisotra ireo botnetsa avy amin'ny rafitrao?
Indrisy anefa fa tsy misy fomba hisorohana ny fahatongavan'ireo botnets sy ny bota hafa, fa afaka manala azy ireo amin'ny ordinateranao amin'ny fomba dimy samihafa.
Soa ihany fa misy programa sy fitaovana sasany ahafahanao manapaka ny botnets Trojan amin'ny lafiny firy. Manoro hevitra anao izahay hampiasa Sysinternals na Autoruns. Tsy hohadinoinao ny hampiditra azy ireo haingana araka izay tratra, ity lisitra ity. Lisitry ny programa rehetra dia manisika ireo botnets rehetra sy bota mahazatra, izay manampy anao hanaisotra azy ireo amin'ny rafitrao.
Procedure №2: Esory ny cache
Raha vao nametraka ity programa ity ianao, dia aza hadino ny manadio ny cache anao. Avelao aho hilaza aminao fa ny ankamaroan'ny botnets Trojan dia mamela ny sombiny ambadiky na dia efa nesorinao aza. Ny fanesorana ny kitapo dia ahazoana antoka fa nesorina avokoa ny sombiny rehetra, ary tsy mila mihazakazaka amin'ny fepetra fiarovana hafa ianao.
Procedure №3: Mametraka ny antibiotika na programa anti-Trojan ary ampitaho izy ireo
Aza adino ny mametraka programa Antivirus sy anti-trojan ary mitazona azy ireo isan'andro isan'andro. Ireo fandaharan'asa ireo dia hanampy anao hanala ny botnets rehetra rehetra, ary ny fisian'ny fanafihana DoS dia mety ho voasakana ihany koa. Ataovy azo antoka fa nitazona ny filaharan'ny fiarovan-tenanao ianao ary tsy mahatsiaro ho nisalasala ny hividy ny volany amin'ny karama ho an'ny singa sy toetra hafa.
Programan'ny rindrambaiko sy anti-malware voarindra
Kaspersky, ESET Nod32, Avast, AVG, BitDefender, Antivir, ary Trend Micro no programa antonontonony azo itokisana izay azonao atao. Ny programa fanoherana malware dia ny Malwarebytes, Emsisoft, ary Zemana. Azonao atao ny manala sy mamoaka ny iray amin'ireo antivirus na anti-malware programa ahafahana manala ny botnets Trojan mandritry ny minitra vitsy. Ireo rehetra ireo dia mampiseho ny fomba fisainan'ny rindrambaiko maloto ny rafitrao ary tsy tokony hadino ny handefa scanner isaky ny mamadika ny solosainao ianao Source .